Umasipala ugaqele eyokusingatha eyokuGwedla kazwelonke – Sivubela intuthuko Newspaper
Umasipala ugaqele eyokusingatha eyokuGwedla kazwelonke
UMKHANDLU waKwaDukuza, enyakatho yesifundazwe saKwaZulu-Natal, usethubeni lokusingatha imidlalo yamazwe omhlaba ezayo yeRowing nokulindeleke ukuba ibekuleli eminyakeni engaphansi kwemihlanu ezayo.
UMgqugquzeli wohlelo lokuvundulula amakhono entsheni ngaphansi kophiko lweRowing South Africa uNkk Fundi Mabaso uthe beyiziphathimandla zale nhlangano yomdlalo wokugwedla izikebhe bazosebenzisana nomkhandlu wakule ndawo ukuze uthole ithuba lokusingatha umqhudelwano wamazwe omhlaba ozayo nokumele ube kuleli.
Isibophezelo sikaMabaso siza emuva kukuthi lo masipala usingathe ngempumelelo umqhudelwano kazwelonke i-National Idoor Rowing obuse Shayamoya Indoor Center ngempelasonto yokuqala yenyanga kaJune.
”Sigculiseke kakhulu ngempumelelo yale midlalo ebesinayo kamuva nje. Okusijabulisa kakhulu ukubona intsha ikhombisa ugqozi nomdlandla kule midlalo,”‘ kusho uMabaso.
Abakwa-Rowing South Africa baphinde banikela ngemishini ye-Rowing ngenhloso yokukhuthaza intsha ukuba izimisele. UMabaso uthe le mishini izosiza ukuqeqesha intsha ukuyilungiselela ukuba iqine ngokwanele mase isesigabeni zokugwedla izikebhe emanzini esigabeni semidlalo yabadala.
”Sinesifiso sokukhiqiza oshampeni kule midlalo abavela ezindaweni ezisemakhaya njengayo le eyaKwaDukuza abazobamba iqhaza emidlalwni yamazwe omhlaba,” kuqhuba yena uMabaso.
I-Rowing South Africa izungeze izifunda zonke zakuleli ngenhloso yokutshala uthando lwalo mdlalo entsheni kusukela eminyakeni eli-11 edlule.
UMabaso uthe indawo yaKwaDukuza ingenye yezindawo ezisesimweni esihle sokubamba imidlalo esezingeni lomhlaba, waphinde wazinikela ekutheni uzosebenza kanzima ekufuqeni umkhankaso wokuthi le ndawo igcine inqobile ukhetho lokusingatha le midlaloo ezayo.
Umkhandlu ngomlomo kasotswebhu, uKhansela Dumsani Ndimande ubonge le nhlangano ngokuletha umcintiswano kazwelonke KwaDukuza.
”Sinethemba lokuthi umkhankaso wethu wokuletha umqhudelwane wamazwe omhlaba kulo mdlalo uzothola ukwesekwa kuzo zonke izinhlaka zemiphakathi okufaka phakathi ezikaHulumeni kanye nalezo ezizimele,” kusho uKhansela Ndimande.
Kuzobanjwa umkhuleko wesifundazwe eBergville